‘शान्तिमा रहन’ छनोट गर्नुहोस् : NepalChurch.com
‘शान्तिमा रहन’ छनोट गर्नुहोस्
[0] July 10, 2016	| Sarju Rijal
आइतवार, जुलाई १०, असार २६,
‘शान्तिमा रहो र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ।’ —२ कोरिन्थी १३:११
आफ्ना चेलाहरूलाई प्रचार गर्न पठाउनुहुँदा येशूले तिनीहरूलाई प्रत्येक शहरमा जान, बस्नको लागि उपयुक्त घर पत्ता लगाउन, अनि ‘तिमीहरूलाई शान्ति होस्’ भन्नु भन्नी आदेश दिनुभयो। उनीहरूलाई मानिसहरूले ग्रहण गरेमा उनीहरू त्यहीँ बसेर सेवकाइ गर्नुपथ्र्यो। तर यदि उनीहरूलाई ग्रहण नगरिएमा उनीहरूले त्यो शहर छोडेर जाँदा आफ्ना खुट्टाबाट त्यहाँको धुलो टकटक्याउनु पर्नेथियो (हेर्नुहोस् मत्ती १०:११–१५)। येशूले किन त्यसो भन्नुभयो त ? किनकि तपाईंलाई मानिसहरूले करबलले सहने ठाउँमा बस्नुभन्दा, तपाईंलाई जहाँ कदर गरिन्छ, तपाईंले त्यहाँ जानु पर्छ। सहायता गरेको नचाहने मानिसहरूसँग तपाईंले आफ्नो समय खेर फाल्नु हुँदैन। यदि तपाईं झगडा हुने ठाउँमा रहनुभयो भने तपाईं प्रभावकारी हुन सक्नुहुन्न। झगडाले पवित्र आत्मालाई दुःखित तुल्याउँछ। कुनै ठाउँबाट शान्ति गएपछि पवित्र आत्मा पनि जानुहुन्छ। अनि खास कामगर्ने व्यक्ति त उहाँ नै हुनुहुन्छ।
प्रश्नः येशूले मानिसहरूको सेवा गरिरहेको तस्विर कल्पना गर्नहुँदा तपाईंले उहाँलाई कस्तो देख्नुहुन्छ ?
प्रायः हामीले अनुभव गर्ने अत्यन्तै तनावमा परेको र हतारको भावमा रहेको त निश्चय नै होइन होला। कोमल, आनन्ददायी शान्तिमा सेवा गरिरहनुभएको तस्विर देख्नुहुन्न र ? तपाईंले पनि त्यस्तै गुण विकास गर्नु पर्छ। ख्रीष्टका राजदूतहरूका रूपमा अरू मानिसहरूसँग व्यवहार गर्दा हामी पनि हाम्रा प्रभुजस्तै हुँदै जानुपर्छ। पावल लेख्छन्, ‘शान्तिमा रहो र शान्तिका परमेश्वर (जो मानव जातिप्रति वास्ता, कृपा, प्रेम र भलाइको स्रोत हुनुहुन्छ) तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ’। शक्ति, तर्क, डर, रिस र बलजफ्तीको साहारा लिनुभएको समय तपाईंले आफ्नै शक्तिमा काम गरिरहनुभएको हुन्छ। तर जब तपाईं मानिसहरूप्रति वास्ता, कृपा, प्रेम र भलाइ प्रकट गर्नु हुन्छ, तब परमेश्वरले तपाईंको साथमा हुने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यसकारण तपाईंको निम्ति आजको वचन छ— ‘शान्तिमा रहन’ रोज्नुहोस।
आत्मिक भोजनः महिमाको बादल गन्ती ९: १५–२३, प्रस्थान २४: १५, मत्ती १७: १–८
« परमेश्वरको स्वर सुन्नुहोस्
मन्त्रीज्यू बालगृहमा धर्म परिवर्तन होइन, बरु सोच विचार परिवर्तन भयो होला »